ब्राजिलमा अमेजनको वन विनाश सन् २००८ यताकै उच्च -
२०७७, १६ मंसिर मंगलवार ०८:४९ December 1, 2020 clickonLeaveaComment on ब्राजिलमा अमेजनको वन विनाश सन् २००८ यताकै उच्च
बिबीसी – विश्वको जलवायु सन्तुलनका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने ब्राजिलको रेनफरेस्ट भनिने अमेजनको वनजङ्गल क्षेत्रको तीव्र गतिमा विनाश भैरहेको ताजा तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। यो गति विगत १२ वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको बताइेको छ।
अमेजन क्षेत्रमा ३० लाख थरी वनस्पति तथा जीवजन्तु पाइन्छन् अनि दशलाख जनजातिय समुदायको बसोबास छ। पछिल्ला आँकडाहरूले त्यहाँ अघिल्लो १२ महिनाको तुलनामा साढे नौ प्रतिशतले वन विनाश भैरहेको देखाएको छ।
अमेजन रेनफरेस्टको विनाश सन् २००८ यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको देशको अन्तरिक्ष निकाय अैएनपीइ ले जनाएको छ। आइएनपीइ ले सङ्कलन गरेका भूउपग्रहबाट खिँचिएका तस्बिरहरूले अगस्ट २०१९ र जुलाई २०२० का बीचमा मात्र करिब ११ हजार वर्ग किलोमिटर को जङ्गल सखाप भएको देखिएको छ। अमेजन वन क्षेत्रलाई विश्वकै महत्त्वपूर्ण कार्बन भण्डारको रूपमा मानिन्छ र यसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको दरलाई कम गराउन मद्दत गर्ने गर्छ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार ब्राजिलमा सन् २०१९ को ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारुले पद सम्हाले यता त्यहाँको विनाश झन् तीव्र भएको छ। बोल्सोनारुले विश्वकै सबभन्दा ठूलो जङ्गल क्षेत्रमा कृषि तथा खानीका क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्।
बीबीसीका विज्ञान सम्पादक डेभिड शुकम्यान भन्छन् वस्तु चरण तथा भटमास खेतीका निम्ति जङ्गल मासिएका छन्। गत वर्ष त्यहाँ प्रत्येक एक मिनेटमा एुटा फुटबल मैदान जत्रो भूभाग खाली गराइेको पाइेको उनले बताए। यो रफ्तार अहिले झनै बढेको बताइन्छ।
शुकम्यान भन्छन् बोल्सोनारु विकासको वाचा गर्दै निर्वाचित भएका थिए। उनी खानी तथा कृषिको प्रबर्धनमा केन्द्रीत छन्। तर वातावरण वैज्ञानिकहरू भन्छन् त्यहाँ रहेका अर्बौँ रुखहरूले ठूलो मात्रामा कार्बन भण्डारण गरेका छन् जसको अभावमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि अझै तेज हुनसक्छ।
बेलायतमा एकै दिनमा कोरोना भाईरस संक्रमितको सन्ख्या १७१ ले बढयो, संक्रमित १५४३ , मृत्‍यु हुनेको सन्ख्या ५५
२०७६, ४ चैत्र मंगलवार ०२:४१ March 17, 2020 clickon
भारतमा प्रस्तुत चुनावि बजेटमा नेपाललाई भारु ७ अर्ब अनुदान
२०७५, १९ माघ शनिबार ०९:०८ February 2, 2019 clickon
बेलायतमा कोरोना भाईरस संकम्रण हुने र मृत्‍यु हुने क्रम जारी, हिजो देखी सबै पसलहरु खोलिए
२०७७, २ असार मंगलवार ०१:२० June 16, 2020 clickon
चर्चित गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘फुटेका चुराले’, भिडिओ मा प्रकाश सपुत, नम्रता श्रेष्ठ र कबिता नेपाली [ भिडिओ]
टिकटकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? केहो बास्तबिक्ता??